'Umfazi Olungileyo' Recap 7 × 08: Izithintelo | - Itv
Eyona Itv 'Umfazi Olungileyo' Recap 7 × 08: Izithintelo
'Umfazi Olungileyo' Recap 7 × 08: Izithintelo
Akuzange nanini na ukuba inkundla yenkundla ibe nomtsalane njengakuqala Umfazi olungileyo . (CBS)
Hayi, bahlala besithi ulungile umfazi , kodwa zange bathethe nokuba ngumama olungileyo. Ndiye ndaziva emva kokugoqa iSizini 7, Isiqendu 8 se Umfazi olungileyo , Ukuthintela. Ixesha elipheleleyo lexesha libonakala ngathi lihamba ngokuzoba umzobo osoloko ungaziwa ka-Alicia Florrick, kwaye kule veki siphakamise le njongo ngezi zinto zilandelayo:
UDiane Lockhart edibanisa iinzwane zakhe echibini lobomi.
UAlicia Florrick noLucca Quinn bayabenzakalisa abathengi.
U-Eli Gold kunye neMeko yeNdaba yeNdaba engalindelekanga yamaRoma.
Yiyo yonke loo nto, kwaye undithembe, ingaphezu kokwaneleyo. Ngale yesithathu ngokukodwa ndandikhe ndabeka ibhulukhwe yam xa ndiqala ukuyifumana. Ke ngoku siyahamba.
Ngale nto ibandayo ivulekileyo, ndinokuyixela ngqo kwi-bat ukuba senza ibali lohlobo loMzali oCwangcisiweyo, kunye nekhamera efihliweyo kunye ne-blas ezibonakala ngathiBungqina malunga nokuvunwa kwamalungu, yikes! Yilungele ingqumbo elungileyo ukuba nabani na angaxoxa ngeesampulu zeethishu kunye neyogathi eqandisiweyo kwimimoya efanayo, kule meko, uGqr Callie Fisher, odlalwa nguQuincy Tyler Bernstine. Umboniso uziswa kuDiane Lockhart nguEthan Carver (Peter Gallagher), emele uReese Dipple, obengamandla angabonakaliyo lonke ixesha ukuza kuthi ga ngoku, njengoko uOliver Platt kubonakala ngathi akafumaneki kwifilimu?
Kodwa, kunjalo, uDipple ufuna ukumangalela umbutho walo mfazi, ogama lakhe ndingazange ndilibambe, kuba ubeka kwakhona iimveku ngokuzalwa okutsha ukuze kube ngcono ukuvuna amalungu abo. UDiane uthi ukuze eli tyala lisebenze, kuya kufuneka bafumane umntu okhuphe isisu, waxokiswa, kwaye wafumana ubunzima obunokulinganiswa ngenxa yoko. Kwaye uqikelele ntoni! Banaye. Igama lakhe nguStacy Groom (Andrea Syglowski), kwaye wena, Diane, beka nje unyawo lwakho lokuqala kwithambeka elimtyibilizi. Ngokuqinisekileyo, uCarver ukuxelela ukuba ufuna nje ukuba umhlolisise, ungathathi imeko, kodwa sonke siyazi ukuba iyaphi le nto.
Kodwa ndithetha ngokwazi apho izinto zihamba khona, nantsi uJason Crouse! Malunga noko ndiziva ngathi andazi nto konke konke. Uhamba ngeenxa zonke kwiipaseji zaseLockhart, eAgos, naseLee, ejonge nje ngokonwaba ngendlela engenako ukungabinayo ikepusi kwiiyure zakhe zophando, ukubekwa kweli tyala litsha lomzimba wosana olungekazalwa.
Okwangoku, amaxesha axhomekeke ngakumbi eFlorrick naseQuinn, apho uLucca Quinn atyhalela khona into esiyibulalayo, oko kungathetha ukuba iqabane ngalinye liya kuthatha they kwinto abayizisayo, kodwa ngokwenene lithetha ukuba badinga imali. Kakubi. Kubi ngokwaneleyo ukuba uLucca uya kwisidlo sasemini seshishini kunye noLouis Canning, yile nto sasidla ngokuxelelana yona emsebenzini wam wakudala ukuba ndichaze ukuba kutheni sonke sasinxibe ngaphandle kokutsho ukuba ndinodliwanondlebe. Jonga umva wakho, Alicia! Ukunkonkxa kukhuphisana noLucca ngexesha elikhulu, kodwa ubona ngokwaneleyo ukuba azi ukuba angangaba sisithiyelo seCanning yokufumana uAlicia ukuba ajoyine inkampani yakhe. Yeyiphi ekufuneka eyenzile ngokunyanisekileyo? Yeka ukulwa nayo.
Okanye, uyazi, musa. Endaweni yoko, yenza intombazana yakho entle engaphucukanga uGrace Florrick ebiza iinkampani zeinshurensi yaseChicago, kwaye unike icala lakhe iliso xa ethetha ngokuhlawulwa. Le ntombazana ngokucacileyo icinezelekile engqondweni yayo ukuba ayonelanga imali eza ngayo, kwaye uza kumngxolisa ngaphezulu kwesiqingatha sepesenti? Uyintoni kuwe, Alicia? Ngaba akufuneki ukuba intombi yakho ibe sesikolweni kwaye / okanye iphuhlise ubuntu obungasekelwanga kumthetho?
Ixesha lokudibana ne-ace-in-the-hole kwityala likaDipple nxamnye noHallie Fisher, umfazi owakhupha isisu kwaye ngoku uyazisola. Uthi uGqirha Fisher wafaka usana kwindawo yokophula ngaphambi kwenkqubo, kwaye akazange abhengeze ukuba izicwili zomntwana ziya kuthengiswa, endaweni yoko ethembisa ukuba baya kuphando kwaye impilo yakhe ayinakuchaphazeleka. Ngoku uStacy akanakutya okanye alale, kwaye nomsebenzi wakhe uye wabandezeleka, isikhundla esichazwa nguDiane ukuba uthathiwe kwiveki ephelileyo okanye, nangona inkqubo yakhe ibikwiinyanga ezilishumi ezidlulileyo. Ngaphambi koko, wayethethile malunga nokukhetha, kodwa kutshanje ujoyine iBandla likaThixo noKristu, kungoko uDiane embiza ukuba aphume kwelinye icala ukuya kwimiba eya kwenye, ngaphandle kwesizathu esinye ngaphandle kokuthatha yima, hayi ngenxa yeenkolelo ezizezona. Zithathele ingqalelo ukuba ukhutshiwe, lingqina leenkwenkwezi! Kodwa uCarver uza kukhulula iiteyiphu kwi-intanethi nokuba kunjalo, ukuze abone ukuba zeziphi iipepole ezenziwe ngabo.
Ukubuyela kwa-Alicia's, uGrace yedwa (ngokwendalo) kwaye uqala ukuqonda imeko engenakoyiswa yomsebenzi awunikiweyo, ke ubiza uEli Gold endaweni yoko, ukubona ukuba unabathengi angathumela indlela ka-Alicia ukuze uGrace angene evela kubanda uyeke ukuthengisa iimatshisi zakhe ezincinci. U-Eli unjengokulunga, ngokuqinisekileyo, kodwa kuqala kufuneka ndenze into ethe kratya kwidesika, kuba loo nto ayide iguge. Ukhe weva ukuba uEli uneofisi encinci? U-Courtney Page (uVanessa Williams) uyazi ngoku, kuba wabizelwa apho ukuba athethe ngesicwangciso sakhe esitsha sokumisela umgangatho wenkampani yakhe, okuthetha ukuba banike bonke abasebenzi bakhe imali yokubabhatala imali efanayo: $ 75,000 . Eyona nto ivakala ilungile kum, kodwa iya kubonakala ngokungaginyisi mathe kuPeter Florrick ngexesha lokubaleka kukaMongameli, eyi-Socialism nabo bonke. Ukusombulula le ngxaki phantse ngaphambi kokuba iqiniseke, u-Eli uthatha isigqibo sokuthumela i-Courtney Page kunye nazo zonke iibhiliyoni zakhe ku-Alicia njengomthengi, kodwa kuphela ukuba uAlicia uyavuma ukuthetha naye ngaphandle komvuzo.
Siphinde sifunde apha ngakwicala elincinci lokuba uAlicia wayalela isifundo ukuba silibazise ukwenza isigqibo kwiBhodi yoNyulo, eluhlobo lwendlela yokujongana nemeko yokujongana ne-cliffhanger yeveki ephelileyo, kodwa kulungile ngokuqinisekileyo, nantoni na oyithethayo.
Okwangoku, umva kumhlaba oKhutshiweyo kwiiNtloko, uHallie Fisher ubanga ukuba ayithathe le vidiyo, isindululo ijaji akufuneki nokuba siyive, kuba ayinalungelo elisemthethweni, kodwa inye, kwaye loo nto iyamphazamisa uDiane, kuba ngoku lo ngumcimbi wentetho yasimahla. Ke utyikitya kuyo emva kokufumana awakhe amazwi acatshulwe kuye, malunga nocelomngeni lokwenyani lomthetho ekumeleni amatyala apho ungakholelwa khona, kwaye andikholelwa ukuba uyakusebenzela ezi yaos. Ugh.
Kwaye nabantu abakwaziyo kwigalari, kuba sizifumanele inkundla enengxolo enkulu, ekhokelwa nguHloniphekileyo uBen Magorvski, odlalwa nguRichard Portnow. UDiane umcela ukuba ayiphathe le meko njengalo naliphi na ityala langaphambi kokuthintela, apho urhulumente azama ukujonga into engekenzeki. UDiane uthi bekungalindelwanga bucala kuba incoko ibisenzeka esidlangalaleni, kwivenkile yeyogathi exakeke kakhulu, kwaye sifumana istickstick ngoku, ngalo lonke ixesha bafuna ukubonisa iklip yevidiyo ukungqina inqaku, kufuneka bayikhuphe ngokupheleleyo i-galley. Ngeli xesha uHeidi (Orlagh Cassidy), umfazi owaqopha ividiyo kwaye umelwe nguDiane, uqhubeka ephatha izandla zakhe njengombulelo, kwaye UDANE NDINGANAKUKHOLELWA UKUBA AKUKHO FIGURED OUT KODWA INDLELA KAKUBI KANYE NOKWENZEKA KAKUBI.
UAlicia uyinikeza ikholeji yakudala ukuba izame noCourtneyney, ethetha ngomgangatho womvuzo, kodwa ufike exhobile ngeevesi zeBhayibhile, kwaye akabonakali ekhathazekile ngamanqaku ka-Alicia anokucaphukisa abanini zabelo okanye abasebenzi abaphezulu; Ekupheleni kosuku, yimali yakhe. Kunzima ukuphikisana naloo nto!
Emuva e-Lockhart, Agos, & Lee, ifemi iyaqala ukubona abanye abathengi bekhathazekile ngenxa yesikhundla esithathwa nguDiane, kubandakanya u-Bea Wilson (Kelly Bishop), olinde kwigumbi lokuphembelela ukuba anike uDiane no-Ethan Carver isiqwenga sengqondo yakhe. ngokujoyina umlo kwabasetyhini ngaphambi kokuba bahlasele. UJason unolwazi olutsha, naye, ukuba inkcaso inesivumelwano sokungachazi esasayinwa nguHeidi kwinkomfa apho wadibana noGqirha Fisher, kwaye iyakwalela nakuphi na ukurekhodwa okanye ukusasazwa kolwazi kwiincoko zabo. UDiane akafumani ukuba isebenza ngokukodwa, njengoko incoko yenzeka ngaphandle kwendawo eyayisayinwe ekuqaleni, kodwa ijaji ayivumelani, isithi incoko yayiqhubeka.
Sikwafumanisa kwi-blip encinci engaqhelekanga ukuba umyeni ka-Courtney Page owayesakuba ngumyeni wakhe u-Larry Oliver ummangalela ngokwaphula umsebenzi we-fiduciary. Ke ikhona loo nto.
Kwaye u-Alicia ufumanisa ngomnxeba kuJason ukuba naye usebenzela uDiane - nangona kungenjalo ngokusisigxina, njengoko efuna - emva kokuba emvile ngasemva. Yongeza nje kwi-enigma nguJason Crouse.
Buyela kwigarret yakhe, ulihlwempu ulusizi, ulilolo uGrace uyabiza phambi kwe-menagerie yakhe yeekhompyuter ezivulekileyo ezidlala izandi zeofisi, kwaye ngempazamo ukhubeke abe ngumthengi wangempela: UBea Wilson ovela kwiBhunga leLizwe lamaLungelo amaNina. Uyacaphuka uDiane, njengoko uzakukhumbula, kwaye unomdla wokuhambisa ishishini lakhe lezomthetho kwenye indawo. Njengabantu abaninzi, njengoko kuvela! UCary Agos uneengxoxo ezithandekayo kwigumbi lokungenela nabantu, kwaye kuyacaca ukuba konke oku kuyenzeka ngenxa yokuma kukaDiane kulo mba; akukho nto injengomhlaba ongathathi hlangothi ekuqhomfeni.
U-Lucca kunye no-Canning bakumhla wabo wesibini ukuza kuthi ga ngoku, ngo-Canning bembeka kuhlobo olunjani lwabathengi anokulindela ukuba angajoyina inkampani yakhe, abathathu ngokukodwa ukuba angathanda ukumnikezela kwangoko. Ukhawuleza ubuyela e-ofisini ukuya kuxelela u-Alicia malunga nabo, ke kuyacaca ukuba bobabini bebekule nto ngalo lonke ixesha, kwaye icebo bekusoloko kukwenza iCanning ibonise isandla sakhe kwaye emva koko uthabathe aba baxhasi ngokwabo ngexesha elifanelekileyo . UGrace uzama ukuxelela umama wakhe malunga nokuloba a enkulu umxhasi, kodwa u-Alicia ngenene akanakukhathazeka ngoku, enkosi kakhulu, ke uGrace ubuyela kwiifowuni zakhe ze-spinster kwaye akhuphe uGinger Gale kwiZiko lezoBulungisa.
Okwangoku, izinto ziye zaya kude noDiane kangangokuba noCary umcela ukuba ayirhoxe ingxabano ngoku, kodwa omnye wabahlobo abatsha ongowasetyhini okanye onemibala ucebisa ukuba uDiane azame umlozi wempempe, kwaye endaweni yokufana noDon Ungandixeleli ukuba ndiwenza njani umsebenzi wam, uyafana, Ooh umnxeba olungileyo, nantsi indlela endiza kuthi ngayo ndicel 'umngeni amalungelo abasetyhini.
Ndisadidekile nokuba kutheni uCourtney nomyeni wakhe uLarry Oliver (U-Isaach De Bankolé) bade babe ngumgca weqonga, kodwa babuya kwakhona, no-Eli ezama ukweyisela i-Courtney ukuba ibonelele ngeeholide ezingenasiphelo kunye neentsuku zokugula kubasebenzi bayo endaweni yayo yonke le nto yomvuzo. Kwaye u-Alicia ujongiwe kangangokuba akabandakanyeki nakule ntlanganiso, endaweni yoko ujonge kwigumbi lenkomfa elikufutshane, afuna ukuliqeshisa ukuze ajongeke ngokusemthethweni kubathengi beCanning njengoko ezama ukubasongela.Tequilalicia, andazi nokuba ungubani kwakhona.
Okwangoku, uDiane usala ukwala umoya ngeli tyala lamalungelo abasetyhini, kwaye uveza ithiyori yakhe yokumpempelela ijaji, esithi ekubeni inkxaso-mali yoluntu iye kwiinkqubo ezenziwa yikliniki, ividiyo ibubungqina bobuqhetseba kwaye kufuneka kubonisiwe. UMargovski kwakhona akavumelani, kwaye eli xesha likwanele ngokwenyani, ukutsala uDiane wabuyela emagumbini akhe kwincoko ekwirekhodi oko ngokusisiseko kuye esiya kwi-WTF WTF WTF STOP kaninzi. Kodwa akangekhe, kuba lo nguDiane, kwaye ukuzimisela kwakhe kuyinxalenye yesizathu sokuba simthande, nokuba usisiyatha.
Ukuthetha ngokuba sisidenge, uLucca noAlicia bayikhathaza ngokupheleleyo kwiintlanganiso zabo nabathengi beCanning. Banjengokuthetha bodwa, bebaxa inani labanxibelelana nefemu yabo ngaphandle kokubonisana, kwaye uAlicia ude abhekise kwiiofisi njengeFlorrick Agos ngaxa lithile. Yiyure enzima engahlawulwayo.
Owu kwaye ukhumbule laa mfazi ngaphambili, uStacy Groom, owatshabalaliswa nguDiane ngokugqibeleleyo xa wayebuzwa imibuzo ngaphambili? Kulungile ngoku uzakumbeka estendini ngokungathi ulingqina elithembekileyo, ngenxa yoko siphulukene nolawulo lweli tyala. UStacy uqhuba intetho yakhe efanayo ngaphambili, kwaye unesifo sokuxilongwa kwe-PTSD esishushu koomatshini bokushicilela izolo, kwaye uDiane ujonge phantsi ijaji kwaye uyayichasa imibuzo awayeyibuze yena kuqala. KWENZEKANI.
Kodwa awukaboni nto okwangoku! Uyakhumbula ngaphambili xa bendisithi uEli wayenonxibelelwano olungenakwenzeka kwezothando kwesi siqendu? Ewe ndafika ndahamba yonke indawo phakathi kwakhe kunye nePhepha laseCourtney ngaphambi kokuba ndiqonde ukuba NGABO NGABO. Kuyamangalisa, nina bantu. Kukho phantse i-zero chemistry phakathi kwaba babini, ke bayabopha le mizila iphakamisa ukuhla nokubuya, malunga nendlela umnyango uvaliwe, kwaye baxoxa ngenjongo yam, kwaye konke endikubhalileyo kumanqaku am YINTONI. INTONI. INTONI. YENZEKA NJANI LE? Kwaye emva koko bancamisana kwaye nengqondo yam yaqhuma.
Ngelixa yonke le nto isenzeka, uLucca kunye noAlicia bayanqatshwa ngabo bonke abathengi ababaphosileyo, kwaye uAlicia uvuthela uGrace, ezama ukumxelela malunga nabaxumi abatsha abakhethwe kubo. Njengaye, ngaba uGrace ubonakala ngathi usisidenge kuwe, UAlicia? Ngokucacileyo ngekhe ucinge ukuba angafumana abathengi abane abatsha ngobukhulu awabenzayo, kodwa awunguye kukonke unomdla wokuza nokuba eze nantoni? Iyandicaphukisa indlela ababhala ngayo uAlicia ngoku. Ke ekugqibeleni uGrace uxelela umama wakhe malunga nabo bonke abathengi athe waphikisana nabo baphoxekile kukumelwa kukaDiane njengoko ebekhathalela iileyili, kwaye uGrace ufumana ukuwolwa okukhulu kunye nombulelo kuMama.
Emuva enkundleni, uDiane ukwindidi zodidi apho ukuze afumane ubungqina abudingayo, kufuneka anike ubungqina obufunekayo, ke soze abufumane ubungqina abudingayo, kwaye ayizizo iidroid ozijongileyo. ye. Njengomzamo wokugqibela womjelo, kuba ijaji ayizukukhupha myalelo wobungqina, ufaka isindululo sokufakwa endaweni yejaji ngenxa yokuthambeka kwezopolitiko, nesiqingatha sento evakala ngathi, kwaye isiqingatha sisichotho nje sikaMariya eDiane eli tyala. Xa uMargovski engafuni ukuzisusa, uDiane uyasusa ngokwakhe Kwityala, kuba akacingi ukuba ijaji ingayinto ngaphandle kokukhetha emva koko, ke kufuneka bafumane elinye igqwetha elingakhange, yazi, esidlangalaleni labiza esidlangalaleni ijaji yendlela kwinkundla evulekileyo. Ke wayifumana into awayeyifuna, ndiyakrokra, kwaye uCary ukrokrela into efanayo kwaye uzama ukumncoma kuyo, kodwa uDiane ufana naye, vala umlomo, lixesha lokuba sibuyise abathengi bethu. Ngethamsanqa nge thaaaaaat!
Emuva kwindawo yokuhlala usapho lakwaFlorrick, u-Alicia akazukujonga uJason emehlweni, nokuba kungenxa yokuba be-effed okanye kuba esebenzela uDiane kwaye unengxaki. Sisenokungazi. Kwaye u-lil usana uGrace Florrick sele eza kulahla ibhombu ngohlobo lwesixa umama wakhe amtyala sona ngalo lonke ixesha lokuqesha awakwenzayo- $ 35,800. EWE UBABALO UFUMANE. Kwaye ukujije, Alicia, ngenkangeleko yobuso bakho xa intombi yakho yayikuxelele loo nto. Wenze umsebenzi wokubulala apho usilele khona, kwaye ndifuna ukuba isimo sakho sengqondo siphelele kwaye siguqulwe ngokupheleleyo ngeli xesha ndikubonayo ngeli xesha kwiveki ezayo.
UMiley Cyrus: Ilizwe elithandekayo kwi-Hip-Hop Sexpot kunye noMva kwakhona
Iibhombu zeGerbils kunye neGay: I-10 yaManqaku eSondo aGqwesileyo kwiWikipedia
'IValerian kunye nesiXeko seeplanethi ezingamawaka': Idabi lokuphakamisa kwiBhokisi yeOfisi
Umhlekisi uMike Yard ukulungele ukujinga iingcingo
eyona g-ndawo vibrator
mcclatchy, cohen, prague,
itraki entsha ye-ice cream
Eyona ndawo iphambili yokuthandana kwi-Intanethi
cwtv ifaka nini iziqendu ezitsha
ubomi bokuphononongwa kwento eyindoda
buyela umva iinombolo zefowuni simahla